November 2015 ~ Myanmar Online News
11:17 PM အင်တာဗျူး, အနုပညာ No comments
8:24 PM နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
ဥရောပ ​တိုက်ထဲကို ​ဝင်ရောက်နေတဲ့ ​ဒုက္ခသည်တွေ ​ကြားထဲမှာ ​အကြမ်းဖက် ​သမားတွေ ​ပါဝင်နေတယ်လို့ ​ဆီးရီးယား ​သမ္မတ ​Bashar ​al-Assad ​က ​သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဥရောပတိုက်ထဲကို ဝင်လာဖို့ ကြိုးစားနေသူများ (Credit: Reuters)
Czech ​ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ ​အင်တာဗျူးမှာ ​ဆီးရီးယား ​သမ္မတက ​ဥရောပတိုက်ထဲကို ​ဝင်ရောက်ဖို့ ​ကြိုးစားနေတဲ့ ​လူတွေထဲမှာ ​ဒုက္ခသည် ​စစ်မှန်သူတွေ ​ရှိသလို ​အကြမ်းဖက် ​သမားတွေလည်း ​ပါဝင်တယ်လို့ ​ပြောသွားခဲ့တာပါ။
သမ္မတလောင်းနေရာ အတွက် စစ်မှုမထမ်းဖူးသူ NLD ပါတီဝင် ၁၀ ဦးကို ယာယီရွေးချယ်ထားသည်ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောကြား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီမှ တင်မြှောက်မည့် သမ္မတလောင်း နေရာအတွက် စစ်မှုမထမ်းဖူးသူ NLD ပါတီဝင် ၁၀ ဦးကို ယာယီရွေးချယ်ထားကြောင်း ယင်းပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
7:48 PM နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ်ရှိ ဘရစ်တနီသည် ၂၀၁၅ သြစတြေးလျ ဆေးမင်ကြောင်အလှမယ်ဆုကို ရရှိထားသူဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ဆေးမင်ကြောင်များထိုးပြီး ဆေးမင်ကြောင် အလှမယ်ဆုကို ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် အံ့အားသင့်မှု များရှိခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ဝေဖန်မှု၊ ချီးမွမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဘရစ်တနီက ဆေးမင်ကြောင်အလှမယ် ဆုအတွက် ဂုဏ်ယူလျက်ရှိသည်။ ငယ်စဉ် ဘ၀က ခြင်ကိုက်ခံရမှုကြောင့် ဖြစ်ခဲ့သော အမာရွတ်ကို ဖုံးကွယ်လိုသောကြောင့် ဆေးမင်ကြောင် စထိုးရာမှ တစ်ကိုယ်လုံး ဆေးမင်ကြောင်များ ပြည့်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးမင်ကြောင်များသည် ဦးခေါင်း မှ ခြေထောက်အထိ နေရာအနှံ့တွင်ရှိနေ သောကြောင့် ဘရစ်တနီလို ငယ်ရွယ်သည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် အများ၏ အာရုံ စိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ရုပ်ရှင် အကြိုခံစားခြင်း- နက္ခတ်မှားတဲ့ တိုက်ပွဲ
6:55 PM အနုပညာ No comments
- ဒီနေ့ရဲ့ ရုပ်ရှင်အညွှန်းကဏ္ဍမှာတော့ မိသားစု ဒရာမာဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကို ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
လက်ျာက သူဌေးကြီးဦးဇမ္ဗူရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားပါ။ လက်ျာက သူဌေးသားတစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ပျော်ပျော်နေ ပျော်ပျော်စား ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ နေပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ သူကလပ်သွားတာကို သူ့အဖေသိသွားပြီး ဆူပါတယ်။ ဆူပေမယ့်လည်း သူကတော့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးအနေနဲ့ ချက်ကျကျ ပြန်ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့အဖေက ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့ ကော်ဖီခြံမှာ သွားပြီးလေ့လာဖို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် ကြည့်ရမယ့် ရုပ်ရှင် - Under the mask
5:51 PM နိုင်ငံတကာသတင်း, အနုပညာ No comments
- ဒီတစ်ပတ် ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ့် ပရိသတ်တွေအတွက် ထိုင်းသရဲ ကားလေး ရွေးထားပါတယ်။ ထိတ်လန့်စရာ ရုပ်ရှင်တွေ မကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် တော့ အဆင်မပြေပေမယ့် ထိုင်း သရဲကား သဘောကျတဲ့ ပရိသတ်တွေ မြည်းစမ်းကြည့်သင့်တယ် ထင်လို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗီဒီယို အကြိုခံစားခြင်း- မာယာမများနဲ့ မောင်
- ဒီနေ့ရဲ့ ဗီဒီယိုအညွှန်းကဏ္ဍမှာတော့ အချစ်ကားလေးတစ်ကားအကြောင်းကို ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ရတီထွဋ်မြတ်က ငွေနဲ့ အရာရာကို ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို ခံယူထားသူပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ ရတီထွဋ်မြတ် စီးလာတဲ့ကားနဲ့ နွားနို့ပို့တဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ စက်ဘီးတိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ရတီထွဋ်မြတ်ဖုန်းပြောရင်း အရေးတကြီး ကားမောင်းလာတာကြောင့်် ဖြစ်သွားတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ရတီထွဋ်မြတ်က ကားတံခါးကိုမဖွင့်ဘဲ ငြိမ်နေခဲ့ပါတယ်။ ငြိမ်မနေတာက နွားနို့ပို့တဲ့လူပါ။
ဗီဒီယို အကြိုခံစားခြင်း - နှလုံးသားလေး တင်းမထားနိုင်ဘူးကွယ်
6:30 PM အနုပညာ No comments
- ဒီနေ့ရဲ့ ဗီဒီယိုအညွှန်းကဏ္ဍ မှာတော့ လူငယ်အချစ်ကားလေးတစ်ကားကို ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
စူးရှက ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ဖွင့်ထားတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ပါ။ သူ့မှာကလေး တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုတော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေလည်းမသိပါဘူး။ သူတို့နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သိကြတာက စူးရှ ပြင်ဦးလွင်ကနေ ပြောင်းလာတာကိုပဲ သိကြပါတယ်။ သားအဖ နှစ် ယောက်တည်းနေတာ ဖြစ်တာကြောင့် အမြဲတက်နေတဲ့ ပြဿနာ ကတော့ အိမ်အကူပြဿနာပါ။သူ့သားလေးကဆိုးတာကြောင့် သူတို့အိမ်မှာ အိမ်အကူမြဲလေ့ မရှိပါဘူး။
5:56 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
အသက် (၈)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်အား ရိုက်နှက်ညှဉ်း ပန်းခဲ့သည့် အိမ်အကူဖြစ်သူ ဒေါ်သန်းနွဲ့နှင့် ယင်းကလေးငယ် တို့ကို အိမ်ရှင် ဗိုလ်မှူးကျော်နု မော်ကိုယ်တိုင် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက် ညနေတွင် ဗဟန်းရဲစခန်းသို့ လာ ရောက်အပ်နှံခဲ့ပြီး အိမ်အကူကို အမှုဖွင့်ထားကြောင်း အနောက် ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲမှူးကြီး ကျော်ထွဋ်က ပြောသည်။
7:02 AM အနုပညာ No comments
ရိုဟင်ဂျာများအား ပြုမူဆက်ဆံပုံများအပေါ် မြန်မာကို ကုလသမဂ္ဂအပြစ်တင်၊ ရိုဟင်ဂျာများအား လုံးဝနိုင်ငံသားအဖြစ်မြှင့်တင်ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂတိုက်တွန်း
7:44 PM ပြည်တွင်းသတင်း, ဆောင်းပါး No comments
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီမှ မြန်မာနိုင်ငံကို ၎င်း၏ နိုင်ငံတွင်းလူနည်းစုမူဆလင်များအား ဆက်ဆံပုံများကို ဝေဖန်လိုက်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ (မြန်မာ) ၏ နိုင်ငံသားစည်းမျဉ်းများကို ပြောင်းလဲကာ ရိုဟင်ဂျာ များကို နိုင်ငံသားအပြည့်အဝပေးရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသား ခံယူခွင့်ပြုနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်မူကြမ်း ကုလထောက်ခံ
ဒီစာစုလေးကတော့မေတို့ရဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ခင်မင်ရာဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုစစ်တမ်းကောက်ထားပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေကို ပြန်လည်ရေးသားထားတာပါ….
လေ့ရှိကြပါတယ်။ ရယ်စရာလူသားအဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်……ထိုအခါ ယခင်အေးချမ်းနေတဲ့ဘ၀မှ ပူပင်သောကများလှစွာသော အိမ်ထောင်သည်ဘ၀သို့ ကူးပြောင်းသွားပြီး ဒုက္ခရောက်ကြရသော လူပျိုကြီး အပျိုကြီးများစွာကိုတွေ့နေရသည်….။
ကြီးပါ……ဆရာနန္ဒသိန်းဇံ၏စာအုပ်ထဲကအတိုင်းပြောရမည်ဆိုလျှင်…လိုချင်တာရနိုင်ပါလျက်နဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေလို့ အိမ်ထောင်မပြုပဲ တမင်နေသူကိုမှ လူပျို လို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပါ………
ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး သနပ်ခါးလိမ်းနိုင်တုန်း၊ နူတ်ခမ်းမွှေးကို မရိတ်ပဲ ဇာဂနာနဲ့တုန်းပါ။(အချိန်တွေ ပိုနေတာကိုး..ဟုတ်တယ်ဟုတ်) အပြေးအလွှားနဲ့ဒုက္ခိတပျားတုတ်နေတဲ့ အုပ်စုထဲသူတို့မပါပါဘူး။
နောက်ဆံငင်စရာမလိုဘူး ။ အလုပ်ကိုနေ့နဲ့ညဆက်လုပ်နေဖြစ်လည်းဘယ်သူ့ကိုမှအားနာစရာမလိုဘူး …….ဘာအနှောင်အဖွဲ့မှမရှိလို့ လွတ်လပ်မှုကိုအပြည့်အ၀ခံစားရတယ် … စိတ်ထဲရှိရင်ရှိသလို ထလုပ်နိုင်တယ် ဘယ်သူ့သြဇာမှခံစရာမလိုပါ….
အိမ်ထောင်သည်နဲ့လူလွတ်တို့အလုပ်ပြိုင်လျှောက်ရင် လူလွတ်ကိုပဲအလုပ်ခန့်ပါတယ်…အိမ်ထောင်သည်ကအလုပ်ချိန်၈နာရီအလုပ်လုပ်ရင်လူလွတ်တွေက၁၀နာရီလည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာစိတ်နှစ်ပြီးလုပ်နိုင်သလို နယ်ကို
အိမ်ထောင်သည်တွေကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မှီခိုအားကိုးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတို့ကတော့မျှဝေစရာလူမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်အားကိုကိုးပြီးကြိုးစားကြပါတယ် ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကောင်းကျိုးကိုကိုယ်ပဲခံစား
ရမှာဖြစ်သလို ဆိုးတာလုပ်ရင်လည်းကိုယ်ပဲခံစားရမယ် ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ အတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ့်အားကိုကိုးပြီးကြိုးစားလေ့ရှိပါတယ်…..ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတဲ့နေရာမှာ အိမ်ထောင်သည်ထက်ပိုပါတယ်
အပျိုကြီး၊လူပျိုကြီးတွေမှာကိုယ်ပိုင်အချိန် ခပ်များများရတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ကိစ္စတွေကို တစိုက်မတ်မတ်ပိုပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်….အထူးသဖြင့် ဥပုသ်ရက်ရှည်စောင့်တာ တရားများများထိုင်တာ ပုတီးများများစိတ်တာအားလုံးကိုအချိန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သာသနာပြုတဲ့ကိစ္စမှာ လူရောစိတ်ပါမြှုပ်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်အိမ်ထောင်သည်တွေလိုငဲ့ညှာစရာမရှိပါဘူး။……
လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေကတော့စက္ကန့်မဆိုင်းကူညီပါလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်လည်းအများစုက တစ်ခုခုအကူအညီလိုရင်အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေကိုပဲအားကိုးကြပါတယ်၊ ဒါဟာပါရမီဖြည့်ပေးနိုင်စွမ်းမြှင့်တာကိုဖော်ပြတာပါ
ဒါကြောင့်လူပျိုကြီး အပျိုကြီးဖြစ်တာကိုစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့……အားသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။မိမိကိုယ်မိမိကျေနပ်ရောင့်ရဲဂုဏ်မက်တယ်မလား....အပျိုကြီး လူပျိုကြီးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပါ။
5:57 PM နိုင်ငံတကာသတင်း, အားကစား No comments
စပိန် လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဖရန်စစ္စကို မာတီနက်ဇ်နှင့် အား ကစားဝန်ကြီး မစ်ဂွယ်ကာဒင် နယ်တို့က လာမည့် စနေတွင် ကျင်းပမည့် ရီးရဲလ်မက် ဒရစ်-ဘာစီလိုနာ အယ်ကလပ်ဆီကို ပွဲတွင် လုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံး ချမှတ် ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်သည်။
သေဒဏ်ကျ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး၏ အယူခံပယ်ချခံရ
5:54 PM နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရား လွှတ်တော်ချုပ်သည် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးအား သေဒဏ် ချမှတ်ထားခြင်းအတွက် နောက် ဆုံး အယူခံဝင်မှုများကို ပယ်ချ လိုက်ပြီး ၎င်းတို့၏ စစ်အတွင်း ရာဇဝတ်မှုများအတွက် မူလရုံး၏ သေဒဏ်ကိုပင် အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
သမ္မတလောင်းနေရာ အတွက် စစ်မှုမထမ်းဖူးသူ NLD ပါတီဝင် ၁...
ဗီဒီယို အကြိုခံစားခြင်း - နှလုံးသားလေး တင်းမထားနို...
ရိုဟင်ဂျာများအား ပြုမူဆက်ဆံပုံများအပေါ် မြန်မာကို က...
ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသား ခံယူခွင့်ပြုနိုင်ဖို့ြ...
New Face Model : မိုးမြတ်သူ
တစ်ဦးတည်းသော အချစ်ဆုံးသူဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သည့် လ...
လဲချားမြို့တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၍ ကလေးငယ်နှစ်ဦးသေဆုံး
‘‘မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အလှမယ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ သ...
ဗီဒီယို အကြိုခံစားခြင်း - ရာဇ၀င်နဲ့ လူ
ပြောလည်း ပြောချင်တယ်၊ ပြောလည်း မပြောရဲဘူး ကိုယ်ကြ...
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် လက်ရှိအခြေအနေထက် ပိုမို...
ဒီတစ်ပတ်ကြည့်ရမယ့် ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် - Prem Ratan ...
ရုပ်ရှင် အကြိုခံစားခြင်း - Knock Knock
ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး လူ ၁၁ ယောက်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ...
ဗြိတိန်ဝင်ငွေ စံချိန်ကိုချိုးလိုက်တဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်...
အနုပညာသက်တမ်း ၁၈ နှစ်ကျော် ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်ပြောေ...
တစ်ကိုယ်တည်းသမား အပျိုကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုး...
မဘသလုပ်ဆောင်ချက်မျိုး ထိုင်းမှာလည်း လုပ်ရှားနေ
အမျိုးသမီးတွေ ရင်သားကျစ်လစ်စေမယ့် နာနတ်သီးဖျော်ရည်
အရင်ကနဲ့အခု ယှဉ်ထိုးကြည့်ရင် ရုပ်ရှင်က လုံးဝပြောင်...
၂၀၁၇ တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကြွေးမြီ ၂၀ ထရီလီယံ ...
အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသားတွေ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို မ...
သားသမီးရှိသော အမျိုးသမီးများ အသက်ပိုရှည်
ဂျာမနီတွင် အသက်(၆၀) နှစ်နှင့် အထက် လုပ်သား သုံးသန်...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆေးဝါးသောက်သုံးမှုများ သတိထားပါ
ဆိုမာလီတွင် ဟိုတယ်တစ်လုံးကို အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက်...
ဘော်ကြိုကျောင်းတိုက်အတွင်း ရှေးဟောင်းဘုရား ၅၆ ဆူ ထ...
ရာဇာထွန်း အမြန်ရေယာဉ်နစ်မြုပ်မှုအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးနှင်...
ရုပ်ရှင်အကြို ခံစားခြင်း - bahubali
‘‘ဇာတ်ရုပ်အမာပိုင်းကို သရုပ်ဆောင်ရတာ ပိုကြိုက်တယ်’...